Vanhu Vashanu Vopora Kubva kuCoronavirus muBulawayo
Bazi rezvehutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwasvika pamakumi mashanu nevatanhatu kuti 56.
Asi vamwe vanhu vashanu kuBulawayo vapora kubva kuhutachiona uhu zvichireva kuti munyika yose vanhu makumi maviri nevatu vapora. Vanhu vafa vachiri vana.
Vanhu vari kurwara makumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 29. Asi nyanzvi munyaya dzeezvehutano dziri kuyambira kuti kushaikwa kwezvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vane chirwere ichi kana kuti matest kits kunoreva kuti vanhu vanoona kunge vari kuparadzira chirwere ichi vasingazive nekuti kue vamwe vanhu vanogona kunge vasingakosore kana kupisa muviri asi vachitapurira chirwere.
Gurukuta rinoona nezvehutano Doctor Obadiah Moyo vakatenda kuti nyika yave kupererwa nezvekuvheneka vanhu. Vamwe vakabva kunze kwenyika vachimbochengetwa munzvimbo dzakasiyana siyana vanoti vave kunzi vabhadhare mari dzinodarika madhora makumi matanhatu nemashanu ekuAmerica kuti vavhenekwe hutachiona uhu.
Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti hurumende haibhadharose vanhu kunze kwekunga huri hurongwa hwavo vega.
Mukuru musangano reCommunity Working Group on Health VaItai Rusike vanoti danho rehurumende rekuti vanhu vagare mudzimba pasina guva yakatarwa harisi kushanda.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zvuru zana kana kuti 100 000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zvuru zvitatu nemazana maviri anemakumi mana nevatanhatu kana kuti 3.246. Vapora vanodarika zvuru zvina nezviviri kana kuti 42, 000
Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mashanu nezvuru mazana matatu kana kuti 5, 3 million.
Johns Hopkins University yemuamerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezvuru mazana matanhatu kana kuti 1,6 million.
Vanhu vafa muAmerica vave kuda kusvika pazvuru zana kana kuti 100 000. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zvuru mazana matatu 300 000 asi vapora vachidarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million.